Falastiin oo ganafka ku dhufatay xil ay ka qaban lahayd Jaamacada Carabta
Riyad al-Maliki ayaa ku adkeysatay in aysan la noqon doonin xubinimadooda.
RAMALLAH, Falastiin – Falastiyiinta ayaa gaashaanka u daruuray in lixda bilood ee soo aadan ay shir-gudoomiyaan shirarka Ururka Jaamacada Carabta, talaabo ay ku muujiyaan carooradooda caadiyeynta xiriirka Israa'iil.
Imaaraadka Carabta, Baxreyn iyo Yahuuda ayaa dhowaan qalinka ku duugay heshiis ay boorka uga jafayaan cilaaqaadka ka dhaxeeya.
Riyad al-Maliki, wasiirka arrimaha dibada Falastiin oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Ramallah, ayaa ku eedeeyay xogheynta Arab League in ay la safteen talaabada dalalkaas Carbeed.
"Go'aanka ay xogheynta Jaamacada Carabta ku taageertay mowqifka Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn kaasoo ay ku caadiyeen xiriirkooda Israa'iil wuxuu xadgudub ku yahay Hindisaha Nabada Carabta," ayuu tilmaamay.
Xilli uusan carabaabid ka fogaadey, Al-Maliki ayaa ku daray "dalal Carbeed oo saameyn leh ayaa diidey in ay cambaareeyaan xadgudubka".
Al-Maliki, sikastay ahaato, wuxuu ku nuux-nuux saday in Falastiin aysan marnaba baneyn-doonin xubinimadeeda Ururka Jaamacada Carabta.
Sagaalkii bishaan September, ururkaan wuxuu ku guuldareystay in uu soo saaro qaraar ay ku dhaleeceynayaan talaabada ay Abu Dhabi iyo Manama ku caadiyeeyeen xiriirka kala dhaxeeya maamulka Yahuuda.
Isla bishaan September, 15-keeda, Imaaraadka Carabta iyo Baxreyn ayaa saxiixay heshiiskaas uu maalgeliyey Mareykanka si ay cilaaqaad diblumaasiyadeed la yeesheen Israa'iil iyaddoo ay qaylo-dhaanta sii xoogeysatay.
Dowladaha Imaaraadka iyo Israel oo heshiisyo horleh kala saxiixdey
Caalamka 22.10.2020. 08:04
Abu Dhabi iyo Tel Aviv ayaa talaabooyinkan cusub waxay ku xoojinayaan xiriirkooda.
Jabuuti oo mowqif cad ka qaadatay dacwada kala dhaxeysa DP World
Afrika 16.01.2020. 21:00
Soomaaliya: Ciidamo ka wada tirsan dowladda oo ku dagaalamay Muqdisho
Soomaliya 21.03.2018. 12:48
Dekeda Boosaaso oo markale xirantay [Khilaaf Cusub]
Puntland 27.11.2017. 17:49
Yahuudi si ola lac ah u laayey qoys Falastiini ah oo xukun adag lagu riday
Caalamka 15.09.2020. 07:20
Imaaraadka oo war kasoo saarey qaraxii ismiidaaminta ee Gaalkacyo
Soomaliya 24.12.2019. 14:42